Siyaasi Cali Maxamed Geeddi “Waxaan maqlayaa dad leh isbaaro hala dhigo oo Xamar qad cagaaran haloo sameeyo” – Radio Daljir
Diseenbar 19, 2018 5:20 b 0
Raysal wasaarihii hoee ee dowladdii KMG ahayd ee lagu soo dhisay wadanka Kenya Cali Maxamed Geeddi ayaa sheegay inay nasiib darro tahay 28sano kadib inay jiraan dad doonaya inay isbaaro dhigtaan.
Waxaa uu ka hadlayay kulan kadhacay magaalada Muqdisho oo lagu taageerayo madaxwaynaha dowladda faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo xildhibaano katirsan baarlamaanka ay mowshin ka keeneen.
Geeddi oo hadlayay ayaa yiri
“Ayaamahan waxaan maqlaayay xan faro badan oo magaalada ku jirta, kacdoon hala sameeyo,jidadka hala xiro,Lugo baabuur ha la gubo,xaafadaha qaar hala qabsado, isbaarooyin ha la dhigo iyo qad cagaaran halaga sameeyo Xamar xantaas ayaan maqlayayee ma anaa waalan mise wax jira waaye.?”ayuu is weydiiyay Cali Maxamed Geedi.
Waxana uu Cali Maxamed ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya uu isugu jawaabay su’aashaas isagoo yiri;”Waa wax jira lama inkiri karo dadka waxaas ku hadaaqaya waxaa la rabaa inay ka waantoobaan hadii kale dowlad iyo Shacab wadajira laguma aadee gurigooda ayaa loogu tegayaa.”
Cali Maxamed Geeddi ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin doonaya 28sano kadib in isbaarooyin iyo qad cagaaran lagu soo celiyo magaalada Muqdisho.
Mowshinka baarlamaanka ee maadxwaynaha iyo khilaafka kadhashay ayaa sababay in siyaasiyiin mucaarad ah xukuumadda jirta inay siyaabo kalle uga faa’iidaystaan, iyagoo sheegaya in dib loogu noqon doono 1991kii, xiligaasi oo dalka uu galay fowdo iyo dagaallo sokeeye oo dad badan ay ku geeriyoodeen.